Zimbabwe to US critics: 'Go and hang on a banana tree' - AP News - Breaking News
Posted: Feb 07, 2017 10:15 AM
"We are waiting for a cue from a new government," Zimbabwe's state-run Herald newspaper quoted presidential spokesman George Charamba as saying. Charamba also denounced U.S. Ambassador Harry K. Thomas Jr. as "a leftover from a terrible era," an apparent reference to past U.S. administrations that have had testy relations with Zimbabwe's longtime leader, Robert Mugabe.
On Monday, the U.S. Embassy expressed deep concern about what it called the "continuing deterioration" of human rights in Zimbabwe. The American statement followed the arrest last week of Evan Mawarire, a Zimbabwean pastor who launched a popular protest movement on social media dubbed #ThisFlag.
"The U.S. Government unequivocally believes in the basic right to freedom of speech and calls on the Government of Zimbabwe to respect the human rights of all Zimbabwean citizens which are enshrined in the constitution," the U.S. Embassy said in a statement.